Harato vy tsy misy vy
Harato fitaovana manokana harato
Sivana Wire Mesh Screen
Crimped Wire harato
Epoxy mifono tariby harato
Stainless Steel Welded Wire harato
Fantatrao ve ireo fiasa lehibe amin'ny efijery vy
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-24
Ireto ny efijery vy misy ireto: efatra ny fizahana: ny fitiliana: ampiasaina amin'ny akora matevina, vovoka ary fisavana amin'ny metallurgy, arina, fingotra, solika, indostria simika, farmasia, fiara, seramika, vera ary indostria hafa. Fiarovana: ampiasaina amin'ny fananganana sivily amin'ny ankapobeny, ba ...
Aiza no ampiasaina be ny harato vy tariby
Ny harato vy dia be mpampiasa, indrindra amin'ny rindrin'ny tranobe, ka ahoana ny fametrahana ireo fitaovana. Ny zavatra voalohany dia ny mametraka ny takelaka avoaka amin'ny tany, ary avy eo apetraho eo amboniny ny sosona taratasy aluminium. Farany, napetraka ny harato vy, avy eo ny fantsona sy tariby dia ...
Bara vy mitambatra ho an'ny fotodrafitrasa amin'ny ho avy | Tontolon'ny Composites
Ny GFRP dia manafoana ny mety hisian'ny korosiana ary mampitombo ny faharetan'ny beton nohamafisina inefatra hihaonana amin'ny fitakiana amin'ny ho avy rehefa mitombo ny fifamoivoizana, ny fivezivezena ary ny fiakaran'ny toetr'andro. #insidemanufaktur # frprebar # Fotodrafitrasa Tetikasa famerenana GFRP lehibe indrindra. Manodidina ny 11000 kilometatra eo ho eo ny re GFRP ...
Ny fomba lehibe ampiasaina amin'ny tariby dashang dia omena etsy ambany
Lamba varahina Wire harato